Dulmanaha Aan Isdhiibin | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed, September 23, 2015
Maxamuud Axmed Muuse — October 14, 2019
Dunida aad arkayso waxa jira dad badan oo ku dulman dunida guud keeda oo haysan wax garab iyo gaashaan unoqda. Maxamed waa wiil Soomaaliyeed oo ku dhashay, kuna barbaaray magaalada Muqdisho.Waxa uu ahaa agoon aan haysan cid garab unoqota iyo cid uu wehel ka dhigto. Maxamed aabihii waxa uu dhalay labo Wiil iyo gabadh oo isku hooyo yihiin.Waxa dhacday in xilligii hogaamiye kooxeedyadii ay habeen uyimaadeen reerka iyagoo raadinaya hub, raashin iyo lacagba. Balse xaafada ma oolin wax lacag ah iyo hubtoona, waxa keliya oo guriga yaalay uu ahaa raashin aan badnayn.
Waxay baaritaan ugu dhaqaaqeen guriga kolkii ay ka waayeen wax laqaato ayay ku dhaqaaqeen handadaad iyo cago juglayn iyagoo raba in ay xoog wax uga soo saaraan. Odayga reerka ayaa dhahay maandhooyinow guriga waad aragtaan waxyaala malahan aan ka ahayn labadaa sali ee aan ku jiifno. Mid ka mida ragii xaafada yimid ayaa qori uu watay raacsaday xabadii, waxa uu sujuuda uga dhuftay odaygii, waana dhintay. Waxa qeylisay maamadii oo tiri Alla maxaad iga disheen odayga, inta ay qabteen bay labo xabad midna caloosha uga dhacday midna wadnaha wayna dhimatay maamadii.
Caruurtii dhammaantood waa wada ooyeen midbaa dhahay war kuwaana raaci faa’ido malahane oo baas ku fureen dhammaan caruurtii. Waxa ka badbaaday Maxamed oo ahaa wiilka xaafada ugu yar oo galay meel jiko ah kolkii uu arkay in dadkaan aysan cidna dhaafeyn.Tuugadiina waxay horay usiiqaateen dhar iyo xoogaagii cunada ahayd.
Maxamed yare waa saddex jir aan lahayn caqli, garasho dheer, mahaysto cid caawisa iyo cid garab unoqota. Subixii waxa isku soo baxay deriskii waxaana meeshii lagu duugay saddexdii caruur iyo labadii waalid. Waxaana wiilkii yaraa ka xaystay oday deriska ah balse odayga ma ahayn mid hela quutka balse waxaa ku adag in saddexda waqti wax helaan. Waxaa dhacday in xilligii Itoobiyaanka soo galeen waddanka in maalin dagaal dhexmaray ciidamadii Itoobiyaanka iyo kuwii maxaakiimta, madaafiic ay iswaydaarsanaayeen ayaa ku habsaday gurigii Maxamed ku noolaa.Waxaana ku dhintay odaygii iyo labo kale. Maxamed oo ahaa 6 jir waxaa soo gaaray dhaawac fudud.Waxaa dhacday in dadkii wixii ka badbaaday madaafiicdii ay kala yaaceen, qof kastaba tiisu qabsatay.
Maxamed waxaa uu ka mid ahaa dadkii lumay oo goonidiisa ufirxaday, waxa uu ahaa mid had iyo jeer dawarsada, dadkana waydiista waxa uu cuno. Ma helo wax uu cuno maalmo, mana helin cid garab siisa, wax uu cuno iyo wax uu caboba. Waxa hoy u ahaa derbiyada. Goor uu rafaadsanyahay ayuu maalintii dambe helay mid kale oo dawarsade ah, kiibayna isku xirteen.Waxaana uu usheegay in ay jirto meel ay ka heli karaan waxay cunaan.Waxaa la aaday Bakaaraha oo ay u arkaayeen meesha keliya ee ay ka heli karaan waxay cunaan. Waxayna bilaabeen in maalintii oo dhan dawarsadaan shilimaadkii ay helaana uruursada, habeenkiina seexda derbiyada.
Cuno waxa u ah haraadiga cunooyinka la cuno iyo kuwa qashinka lagu qubo.Waxayna ku noolaayeen muddo. Waagii dambe waxay go’aan sadeen in ay shaqaystaan waxay soo gateen Luujito iyo burushkooda, sidaas ayay ku shaqaysan jireen, waxayna uruursadeen wixii ay heleen oo lacag ah. Waxayna udhiiban jireen nin ganacsade ah oo ay isdheheen ninkaan baa aamina.
Muddo labo sano ah ayay shaqaysanaayeen waxayna heleen lacag dhan $1562 doolar. Waxayna go’aansadeen in ganacsi la furto, lana shaqeysto. Waxaa loo tagay ninkii ganacsadaha ahaa waxayna ku dheheen waxaan kaa rabnaa lacagtii in aad nasiiso oo ganacsi baan rabnaa in aan ku bilaabano. Odaygii wuxuu ku dhahay wax aan idin hayo malahan baxa, waxaad tihiin derbiyo jiif tuugo ah oo raba in wax aysan lahayn qaataan. Haddaan agtayda idinku arko waan idin dilayaa, isagoo ucago jugleeyay labadii wiil.
Wiilashii waa iska ooyeen balse waa ayaga baroortaye cid wax uqabanaysaa ma jirto. Maalintii dambe ayay uyimaadeen oo ku dheheen lacagta wax un nagasii, inta uu ku soo jeestay buu dhahay ma anaa lacag iwaydiinaysaa isagoo ugacan qaaday wiilashii. Waxaa ku soo xoomay dad badan, muran iyo qaylo badan kadib waxay go’aansadeen in odayga la dhaho caruurta iska sii wax un lacag ah. Inta gudaha galay buu 100 kun oo shillin Soomaali ah soo qaaday dhahay qaata, 50 kun oo shillin Soomaali ahna Caawa idin siinayaaye igu imaada meel hebla waayahay bay dheheen caruurtii iyagoo farxay.
Habeenkii kolkii lagaaray ayay isxaadiriyeen goobtii, waxayna la kulmeen labo nin oo wajigu uduubanyahay waxayna wateen baangado iyo ulo. Waxay bilaabeen in ay dilaan wiilasha, waxayna saddex tooray rubadda kaga dhufteen wiilkii kale halka Maxamedna Baangad ay madaxa uga qaadeen, waxaana ka soo dhacday il, waana dhiig baxay oo bartii bay uga tageen ayagoo mayd uwada haysta. Waxay meesha yaalaan subixii markii lagaaray baa waxaa arkay caruur meel ciyaaraysa way qaylo dhaansheen, waxaana la helay labadaan wiil oo midna suuxsanyahay midna mayd yahay oo meesha yaal.
Dadkii waxay la carareen wiilkii suuxsanaa, waxayna geeyeen isbitaal si gargaar degdeg ah loogu fidiyo. Halka kii kalena la aasay.
Wiilkaan yar ma uusan helin daryeel caafimaad oo wanaagsan, waxa uu ahaa mid had iyo jeer ku dhaca derbiyada, awalba mahaysan hoy, hu’ iyo cuno toona. Waxa uu sidaas ku jiraba muddo waagii dambe waa iska roonaaday Alle amarkiis. Balse waxa uu waayay mid kamid ah nimcooyinka Alle siiyay ee ah labadiisa indhood mid ka mid ah.
Waxaa dhacday in ninkii sidii la ogaa ugalay uu maalin maalmaha kamida uu maqaaxidiisii, carwadii iyo bakhaarkiiba dab qabsaday, halkaasna uu ku waayay maalkii uu intaas tabcaayay.
Nabsigu ma daahee waxaa dhacday in maalin maalmaha kamida uu asagiina uu ku dhintay qarax, isaga iyo labo wiil uu dhalay.Waxaana lugaheedii ku wayday gabadh inan ahayd uu dhalay.
Maxamed waxa uu dib ubilaabay in uu baarashkiisii ka shaqeeyo, waxa uu uruursaday xooga lacag ah, kadibna waxa uu bilaabay in uu iibiyo cabitaanada meelaha boosteejada ah. Muddo kadibna waxa uu gatay makiinadaha cabitaanada lagu shiido iyo miiskoodii halkaas ayuu ka shaqeysan jiray muddo.Waxa uu yeeshay xoogaa lacag ah, waxa uu bilaabay in uu waxbarto, waxa uu galay bareefad isagoo bartay Soomaaliga, Carabiga, Xisaabta iyo Ingiriiska.
Markii uu iska dhisay asaaska waxbarashada waxa uu galay iskuul, waxa uu dhammeeyay dugsiga sare, wuxuuna galay Jaamacad. Hadda waxa uu dhammeeyay Jaamacad, waxa uu isku waday waxbarashadii, shaqadii, waana uu ku guulaystay in uu gaadho hadafkiisa.
Maxamed waxa uu ka midyahay ciidanka xoogga dalka, guutada 14-ka Octoobar, waa halyey u heelan in uu difaaco dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa.Wuxuuna utaaganyahay in uu dalkiisa ka xoreeyo cidkasta oo rabta in ay dib udhac ugaysato iyo in uu naftiisa ka hormariyo waxkasta, danta guudna ka shaqeeyo.
Waxa uu halganka ugalayaa in uu naftiisa ka horumariyo, dadkiisana ay ku naaloodaan nabad iyo baraare, caddaaladna ay helaan dadka aan haysan wax cadaalad ah iyo in uu ka shaqeeyo sidii loogu gurman lahaa dadka aan awoodin in ay waxbartaan iyo kuwa aan haysan wax ay quutaan iyo meel ay seexdaan. Noloshuna ma ahan mid raaxo lagu helo, dhibta aad hadda dareemayso waxaa jira kuwo kaa daran oo dareemaya culays kaaga ka awood badan, kana culus, taadana u arkaya basiid.
Mar walba dantaada ka hormari danta guud, adoo ka fekeraya, aakhiradaada, mustaqbalkaaga iyo noloshaada. Hana samayn dulmi waayo Alle wax kasta oo aad samaynayso waa ogyahay, maalinay ahaataba waa lagu qaban, xataa haddii adduunka aadan ku arag ciqaabtaas, waxay kaaga horayn aakhiro, waxayna haleelaysaa ubadkaaga iyo qoyskaaga. Haddaba ka digtoonow in aad samayso dulmi iyo in aad dadka dhiigooda banaysato.
Yeelo hadaf iyo hididiilo, waxaad tahay waxa aad adigu iska dhigto.Waxayna dadku kuu arkayaan sida aad adi tahay.
Tags: Dulmanaha Aan Isdhiibin
Next post Astaamaha Lagu Garto Gabadha Xun
Previous post Aqoonyahan Maangaab Noqday?